11 / 05 / 2021 12 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 2969 Views စာ0မှတ်ချက် 10292 Friends Apartments, 21302 Big Bang သီအိုရီ, 21319 ဗဟို Perk, Anderson Grubb, Chandler Bing, Friends, Ideas, Janice, ဂျို Tribbiani, Lego, Lego Ideas, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, မော်နီကာ Geller, ဖိဗေ Buffay, ရာခေလအစိမ်းရောင်, Ross Geller, VIP
အဆိုပါ Lego အုပ်စု၏နှစ်ရှည်လများကျင်းပခဲ့သည့်ကောလာဟလများကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Lego Ideas 21319 ဗဟို Perk, ထို sitcom- မှုတ်သွင်း 10292 Friends Apartments.
တည်မြဲသောရေပန်းစားသောတီဗီရှိုးကို အခြေခံ၍ ဒုတိယအကြိမ်၏စကားလုံးသည်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် နောက်ကျောဇန်နဝါရီလ, အခြေခံပေါ်မှာလိမ့်မယ်လို့အကြံပြုကတည်းကလအနည်းငယ်အတွင်းစပျစ်နွယ်ပင်ကိုဆင်းစီးဆင်းအသေးစိတ်နှင့်အတူ မော်နီကာနှင့်ရာခေလတို့၏ apartment.
သူများသည်ကောလာဟလများထို့နောက်တစ် ဦး အားဖြင့်တနင်္ဂနွေကျော်အတည်ပြုခဲ့ကြသည် တရားဝင်လှောင်ပြောင်ရာသီ 10 ၏ The Late Thanksgiving With The One ကနေအထင်ကရအခိုက်အတန့်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးပေးခဲ့တာပါ - ဒီပြပွဲရဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဇာတ်လမ်းရဲ့အနိမ့်ဆုံးရုပ်ပုံတွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာအရိပ်အမြွက်ပြောကြား။
ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်, အများကြီးပိုရှိပါတယ် 10292 Friends Apartments ကြောင်းတိုယိုတာသို့မဟုတ်အစောပိုင်းကောလာဟလများအကြံပြုဖြစ်စေထက်။ မော်နီကာနှင့်ရာခေလတို့၏ ap နှင့်အတူartထို့အပြင် 2,048-piece set တွင် Joey နှင့် Chandler's ap လည်းပါဝင်သည်artအပါအ ၀ င်ယခင် sitcom- မှုတ်သွင်းထားသည့်အစုံ၏အရွယ်အစားနှင့်ခြေရာကိုနှစ်ဆတိုးစင်္ကြံတစ်ခုနှင့်ကပ်လျက်အချပ်တစ်ခုဖြစ်သည် 21319 ဗဟို Perk နှင့် Big Bang သီအိုရီ 21302 ။
အသေးစားဓာတ်ပုံ ၇ ချက်သည်စီးရီးတစ်ခုလုံးမှ ၀ တ်စုံအ ၀ န်းအ ၀ န်းမှဆွဲယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး ap နှစ်ခုလုံးတွင်ပြန့်ကျဲနေသည့်ရည်ညွှန်းချက်များ၏စကားလုံးများဖြစ်သည်။artပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ။ မာတိကာကိုသင်အနီးကပ်ကြည့်နိုင်သည် 10292 Friends Apartments ငါတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံပြခန်းဒါမှမဟုတ် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဤအ p နောက်ကွယ်မှလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံ rundown သည်artRoss, Rachel, Monica, Chandler, Joey, Phoebe နှင့် - ပထမဆုံးအကြိမ်အတွက် Lego - Janice ။
"၏အောင်မြင်မှုအပြီးတွင် Lego Ideas Central Perk အစုံမှာဒီကျော်ကြားတဲ့ ap ကိုအာရုံစိုက်ပြီးဒီအထင်ကရတီဗွီအစီအစဉ်ကိုနောက်ထပ်ဂုဏ်ပြုချင်တယ်artပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဒီဇိုင်းပညာရှင် Anderson Ward Grubb ကပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့က set ၏ထုတ်လုပ်မှုဓာတ်ပုံများအနေဖြင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်အဖြစ်ကောင်းစွာဖြစ်စဉ်များအများကြီးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအထင်ကရအချိန်လေးဖမ်းဆီးနိုင်ဘူး။
“ ပျော်စရာကောင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ပြသမှုအချို့မှာမဟုတ်ဘဲအခြားဇာတ်လမ်းတွေမှာမပါဝင်ဘဲပြသနေတဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဘယ်လိုကိုယ်စားပြုမလဲဆိုတာရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်။ လင်းယုန်မျက်လုံးပရိတ်သတ်တွေသူတို့တွေ့မှာကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မယ်။ ”
10292 Friends Apartments VIP အသင်းဝင်များအတွက်မေလ ၁၉ ရက်တွင်ရောင်းချမည် LEGO.com နှင့် Lego ဇွန်လ ၁ ရက်မှစတိုးဆိုင်များ ၁၈ စုံသည်ယူကေတွင်ပေါင် ၁၃၄.၉၉၊ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၁၄၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၁၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်။ ယခုအပတ်နှောင်းပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုသတိပြုပါ။
← LEGO သည်ကောလာဟလများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပြီးပါပြီ Batman UCS ခွက်
ဘယ်ဖြစ်စဉ်များ Friends Lego 10292 ဖြစ်ကြသည် Friends Apartအပေါ်အခြေခံပြီး menti '' minifigures? →